Abuur xusuusta farsamada ee baakadaha leh CivilCAD - Geofumadas
Janaayo, 2012 AutoCAD-AutoDesk, cadastre, IntelliCAD
barnaamijyada aad u tiro yar ayaa taas samayn, ugu yaraan la halleeyo lillaahinimada iyo in ka dhigaysa CivilCAD
Waxa sida caadiga ah aan filayno waa warbixin ku saabsan baakadaha, baloog, miiskooda tilmaamaha iyo masaafada, xuduudaha iyo isticmaalka. Aan aragno sida loo sameeyo CivilCAD, iyada oo la adeegsanayo AutoCAD inkastoo ay sidoo kale la shaqeyso Bricscad taas oo ka jaban oo ka shaqeysa isla caqligal ah AutoDesk:
Hawlaha aan soo bandhigi doono waxaa laga isticmaalaa liiska warbixinnada, waa xagga hoose ee baarka ujeeddada layligan aan u gooyay. Asal ahaan waxay u oggolaaneysaa saddex dhinac oo muhiim ah: Qeex walxaha, hel hal mar markii la qeexay ka dibna soo saar warbixinnada; Sida walxaha, waxay u oggolaaneysaa la shaqeynta dhibco, xuduudaha, waxyaabo badan iyo baloogyo (in kasta oo kan dambe uusan muuqaal ahaan jirin, laakiin ay yihiin sifo ka mid ah guryaha, kordhintooduna ay tahay wadarta kuwan)
1. Muuji soohdimaha dibadda
Tani, menu waxaa loo isticmaalaa: CivilCAD> Warbixinno> Tilmaam> Isugeyn
Kadibna waxa aan sameyno waa taabashada xuduudaha dhismaha ee ku dheggan wadada weyn, ka dib waxaan sameynaa Gali oo qor xadka. Calaamadda la shaqeeyay ayaa ah inay midab beddelaan, una gudbaan lakabka loo yaqaan CVL_COLIND. Aad ugu egtahay wixii Microstation Geographics ay sameeyeen markaad dejinayso sifooyinka, inkastoo aysan jirin xog-ururin halkan.
Waxaan sidan oo kale u sameeynaa xuduudaha ku dhajiya waddada kale, marka laga hadlayo tusaale ahaan:
Tani waxa ay sameeyneyso waxay abuureysaa sifo walaxda, oo la xidhiidha magaca xadkaas.
Si aad u aragto is-baheysiga, waxaa la sameeyaa: 'CivilCAD> Hel' Ku dhow. Waxaan qoreynaa soohdinta muujinta khariidaduna waxay diiradda saari doontaa dhererka xadkaas oo dhan, sida Bentley Map ay ula socoto geolocate-ka. Mid kasta oo ka mid ah jadwalkaas waxaa jira amar qoraal ah, kiiska midkani waa -LOCCOL.
2. Muuji dhagarta iyo baloogyada
Si aad u tilmaanto waxa sawirku yahay, waxaa lagu sameeyaa: CivilCAD> Warbixinno> Muuji> Bakhtiyaanasiib
Guddi ayaa la soo saaray halka aan ku dooranayno shuruudaha calaamadeynta ee badan: cabirka qoraalka, haddii aan rabno inaad qorto lambarka guriga, dhismaha ama isticmaalka. Maaddaama ay tahay geedi socod is-jiil ah, waa inaad qeexdaa waxa lambarka hore yahay.
Calaamadda la farsameeyo waa in la sameeyo faleemo xidhan oo ku yaala daamanka CVL_LOTIF.
Ayaa wax yar la yareeyo habka this, oo ay ku jiraan in tiro aan u dhigi karto 01, 02, 03 ... laakiin meelaha sida 1, 2, 3 sidaas darteed haddii Cadastre dalalka buugan waa in ay isticmaalaan laba lambar oo ay leeyihiin si ay u edit.
Laakiin guud ahaan amarku waa weyn yahay, looma baahna in xuduudaha la soo saaro, lisp-ka ayaa ka dhigaya iyaga oo isticmaalaya amarka BPOLY, sida iska cad waa inaad fogeysaa si aysan u qaadan waqti dheer maxaa yeelay amarkan ku yaal AutoCAD wuxuu iskaanka ka dhigayaa dhammaan aagga muuqda. waxayna ku qaadan kartaa waqti badan bandhig aad u ballaaran. Waxay sidoo kale keentaa dhibaatooyin marka ay jiraan geesaha wareegsan ama xargaha xargaha oo aan sahlaneyn in laga shaqeeyo CAD.
Waa muuqata, in geeddi-socodkani khariidada loo baahan yahay in la helo nadaafada jirkaHaddii kale, waxay abuuri doontaa aagag qaldan. Haddii ay dhacdo in hanti si khaldan loo khalday, si khaldan, ama aan wax ka beddel ku sameynay, kaliya geesoolayaasha ayaa la tirtiraa waana la cusboonaysiiyaa, maaddaama astaantu ay qaab tahay. Qaab waliba wuxuu la xiriiraa inta uu le'eg yahay, tirada hantida, baloogga iyo isticmaalkiisa.
3. Muuji qodobbada
Nidaamka si loo abuuro noodeska qeybta hoose, waxaa la sameeyaa: CivilCAD> Warbixinnada> Muuji> Bar
Kooxda kor u kacda waxay na weydiineysaa haddii aan dooneyno inaan si shaqsi ah ama dhibco u soo saarno. Waxaan sidoo kale dooran karnaa qaabka barta, cabirka qoraalka iyo lambarka uu ku bilaabmayo.
Just cabsi badan, waxaan weydiisan doonaa in Apple rabto in ay curiyaan dhibcood, iyo nidaamka ka dhigaysa nidaamka a kaas oo uu baaritaanku dhan qanjidhada on xuduudaha ahaan midaysan, waxaan iyaga ka dhigi dhibic, si wadajir ah kubada iyo waxa ay taasi sifo la urur aan ollogga ah ee sida habka aad mar dambe u heli kartid ikhtiyaar: CivilCAD> Warbixinno> Meel ku ogow> Bar.
Dhamaan dhibcooyinka la soo saaray ayaa lagu keydiyay lakin CVL_PUNTO iyo qoraallada CVL_PUNTO_NUM
Si la mid ah, tufaax ama wax badan ayaa la heli karaa, in kasta oo ficil ahaan aysan ahayn wax sidaas u fudud haddii tirooyinka lagu celiyo. Waxay ku xirnaan doontaa nidaamka magac-bixinta cadastral, qaar badan baa oggol soo noqnoqoshada baloogyada khariidad kala duwan oo laba jibbaaran oo sida muuqata tirooyinka hantida lagu celceliyo dhisme kasta.
3. Abuur warbixin farsamo ama sharraxaad leh.
Halkan ayaa ugu fiican. CivilCAD waxay soo saari kartaa warbixinno kala duwan sida:
Soo koobida meelaha: Kani wuxuu marka hore soo koobayaa baloogyada, isagoo tilmaamaya aag u heellan adeegsi kasta oo guri kasta ah, ka dibna ka hooseeya soo koobidda isticmaalka ee baloog kasta iyo ugu dambayn soo koobidda adeegsiga dhammaan baloogyada la xushay ama dhammaan khariidada la xidhiidha.
Dulucda warbixinta: Tani waxay soo saartaa liis ay ku jiraan afar tiir: lambarka lambarka, isuduwaha X, Isku-duwidda Y iyo kor u qaadista.
Marka laga hadlayo Warbixinta qeexan. Haddii aan codsanno xannibaaddaas, warbixinta waxaa la soo saaray oo tilmaamaysa magaca khariidadda, taariikhda, ka dibna mid mid loo saxayo waxaa lagu sharxayaa aaggooda la xisaabiyay, isticmaalka iyo soohdimaha sida lagu arkay sawirka soo socda. U fiirso in nidaamku sameeyo falanqeyn xuduudeed oo wadajira, sidaa darteed wuxuu xisaabiyaa oo keliya cidda in badan ee ku dhow banaanka, xogta ay ka hesho soohdinta baloogga, laakiin sidoo kale cidda ku jirta gudaha dhismaha.
Haddii aan rabo inaan abuuro warbixin nooc ah Warbixinta farsamada, Jadwalka waxaa ku jira wax kasta oo badan: saldhigyada xuduudaha, qaadista, masaafada iyo iskuduwaha cirifka. Sidoo kale aagga, isticmaal tanna waa mid laga kireystay guri kasta oo ka mid ah baloogyada la tilmaamay.
Waxaa warbixin kale taas oo ah isku dar labadaba ah, inkasta oo sida AutoCAD qabtaa xasuusta waxaa lagu talinayaa in uu ordo wararka weyn haddii ay jiraan guryaha badan sida aynu abuuri karaan qalad xusuusta burburkii dilaa.
Gabagabadii, uma xuma barnaamijka CAD. Waxay xallisaa howlaha caadiga ah ee naqshadeynta magaalooyinka ama maaraynta cadastral.
Post Previous" Hore Plex.Earth, tusaale wanaagsan oo ah dhexgalka suuqa Hispanic
Post Next LibreCAD ugu dambayntii waxaannu yeelanaynaa CAD a freeNext »
6 wuxuu ku jawaabayaa "Abuur xusuusta farsamo ee xirafadaha leh 'CivilCAD'
David TV isagu wuxuu leeyahay:
sida loo sameeyo xusuusta sharaxaadda iyo soo koobidda meelaha ay soo saareen rayidka waxaa lagu sawiray jadwalka autocad oo aan loo dhoofin Word.
MarCal isagu wuxuu leeyahay:
Descmasterku waa wanaagsan yahay laakiin waa la bixiyaa, waxaan hadda ku dhammeystiray mid kan la mid ah oo bilaash ah
Karlos c isagu wuxuu leeyahay:
Hello Byron, haddii aad ii soo diri karto barnaamijka ama macluumaadka emailkan
Byron Erick isagu wuxuu leeyahay:
Hada, Waxaan haystaa barnaamijka Descmaster
James Linares iyo halka aan ka helo barnaamijkan 'Descmaster', waxaan ka heli karayay buugga oo keliya oo aan kaga daawado internetka. laakiin ma jiro barnaamij, haddii aad i siin karto macluumaad ku saabsan sida loo helo aad ayaan ugu mahadnaqayaa,,.
Waxaan ahay cartoonist, salaan ka soo Peru
James qulqulka isagu wuxuu leeyahay:
Waa inay isku dayaan "Descmaster", taas oo ah mid ku filan in lagu sameeyo Faahfaahinta farsameed ee loo isticmaalo qorista.
Barnaamijkan waxaa sameeyey Eng. Jaime Ramirez oo ka socda El Salvador